China 500ml Misi Mvura Ruoko Sanitizer TECH-BIO fekitori uye vagadziri | Zhongrong
Pasi pesimba recovid-19, Ruoko Sanitizer inova yedu yekuchengetwa inodikanwa muhupenyu hwedu hwezuva nezuva kunyanya mune dzimwe nzvimbo dzeruzhinji senge chikoro, chipatara, supamaketi, hotera, nezvimwewo Ichi chigadzirwa chine 75% doro rinogona kuuraya coronavirus nemamwe utachiona kuchengetedza hutano hwedu zvakanyanya. 500ml pack yakanaka kwazvo kuti ishandiswe nemhuri uye inogona kumhanyiswa munenge hafu yemwedzi. Sezvo isu tinogadzira yakasvibirira doro doro, mutengo wedu unenge uchikwikwidza nehupamhi hwepamusoro kune yedu ruoko sanitizer. Kunze kwezvo, isu tapfuura CE, FDA, uye ISO ongororo. Isu tinotanga brandTECH-BIO kuiita seNo.1 brand yeiyo disinfection muChina sezvo isu tine mhando yepamusoro yedoro muChina. Isu tiri mutungamiri muChina kune ethanol tekinoroji. Tine dzinosvika mazana mashanu emazana emamirimita mita yemusangano nzvimbo munzvimbo yeHebei, China. Kambani yedu yakavambwa muna 1999. Zvisinei, isu tinogona zvakare kugamuchira OEM & ODM yemarudzi ese emaoko sanitizer. Kutarisira mberi kuve wako wepasi rose mudiwa uye kuzadzisa kuhwina-kuhwina mamiriro!
Net Vhoriyamu: 500ml
Zvakanakira: Doro Rakavakirwa · Zvakachengeteka Zvakatipoteredza · Triclosan Yemahara · Yakanyoroveswa
Isingashandisi Zvinongedzo: Yakanatswa Mvura, Carbopol, Isopropyl Doro, Triethanolamine, Mafuta.
Ndezvipi zvinhu "zvakajairika" zvainotsvenesa? Ichauraya corona?
Ndatenda nemubvunzo mukuru! Isu tinonyatsonzwisisa kuti sei iwe uchibvunza uyu mubvunzo. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iyo FDA parizvino haina kubvumidza chero mishonga, kusanganisira yekuchenesa maoko, kudzivirira kana kubata covid-19. Isu tinotora mutoro wedu kuona kuti vatengi vari kuenda kune chaicho sosi yerudzi urwu rweruzivo, uye nekudaro tinokutungamira iwe kune iyo FDA kana CDC mawebhusaiti kuti udzidze nezve iro basa revanoshenesa mukudzivirira kupararira kwe COVID.
Ndinokutendai nekusvika nezve TECH-BIO Mhepo Yekuchenesa Ruoko! Edza kutsikirira pasi papombi nechanza chako uye kutendeukira pakaunda zvichibva wachi nechigadzirwa chakatarisana newe. Pombi inofanira kubva yabuda.
Pashure: OEM Ruoko Sanitizer
Zvadaro: 50ml Ruoko Sanitizer Gel TECH-BIO